3.3 MacBook Pro Draịvụ Iweghachite
3.4 iMac Draịvụ Iweghachite
Ike draịva bụ a kpọmkwem akụrụngwa na a kọmputa data nchekwa. Ha nkejikotara nke a ole na ole yiri disks kpuchie ke a ikpe, actuator, actuator axis, actuator ogwe aka,-egosi banyere Kraịst, spindle, isi, na ike na ide njikọ ya.
Part 1: Top wakporo Draịvụ Iweghachite Software
Data mgbake si wakporo draịva nwere ike ịbụ mfe ma ọ bụ na-egbu mgbu na-adabere na larịị nke wakporo na ọdịdị nke wakporo, a ngwaike wakporo ma ọ bụ a software wakporo. Software raids nwere ike pụta ga-adị mfe naghachi ke ido na data na-echekwara na n'ụzọ anụ ahụ dị iche iche diski. Ọ bụ bụghị ikpe mgbe niile. Software raids nwere ike ịbụ ka ike dị ka ngwaike raids mgbe na-abịa na-agbake data n'elu a na-emezughị disk.
E nwere nsogbu na-agbanwe agbanwe. Ọ na-emekarị ọbụna mgbagwoju anya mgbe ị chọrọ ifopụ data aka si a malfunctioned ike mbanye. Ọ bụrụ na a ike mbanye na-adịghị wakporo ahazi, ị na-adịghị mkpa iji mgbagwoju anya ụzọ. Iji mee ka ọ dịkwuo mfe e nwere software ngwa nke na-wakporo mgbake mfe.
GetDataBack https://www.runtime.org/data-recovery-software.htm $ 79 ~ Windows
ReclaiMe Free wakporo Iweghachite http://www.freeraidrecovery.com/ Free download Windows
Zero Assumption Iweghachite http://www.za-recovery.com/ $39.95 ~ Windows.Linux
DiskInternals wakporo Iweghachite eji a n'ụzọ zuru ezu akpaghị aka usoro maka data mgbake si raids. Ọ bụghị amanyere bụ iwu ka nwere ihe akpaka data mgbake na nke a software; ị nwekwara ike eme ya onwe gị aka.
The akpaka mode ohere ọrụ-na na na ka software ime ya niile.
Ọ nwere ike na ịgbanwee n'etiti akpaka na ntuziaka ụdịdị.
Ọ na-akpaghị aka na-achọpụta rụọ ụdị disk n'usoro.
Akwụkwọ ntuziaka mode ga-eme ka software ikpebi n'usoro ụdị dabeere na onye ọrụ ntinye kama eziokwu.
GetDataBack software na-abịa abụọ iche-iche, otu maka abụba na otu maka NTFS faịlụ usoro. Ị nwere ike ịzụta dabeere na gị mkpa.
Gụọ nanị imewe; ọ dịghị mberede deletions kwere omume.
Na-akwado SSD, USB, flash kaadị na niile ike draịva.
Na-akwado NTFS, FAT12, FAT16 na FAT32 faịlụ na ụdị.
Ọ nēche bụghị na-arụ ọrụ ole na ole PC, karịsịa na Windows Operating System.
3.ReclaiMe Free wakporo Iweghachite
ReclaiMe Free wakporo Iweghachite bụ bụghị ihe kpamkpam free data mgbake software. Nke a bụ ikpo okwu ebe ị pụrụ n'ezie ịhụ nke faịlụ dị maka mgbake. Ị nwere ike ikpebi ma na ị nwere data dị gị mkpa ma ọ bụ.
Ị nwere ike ịlele ndekọ, faịlụ na nchekwa na mebiri emebi disk for free.
Dị iche iche etoju nke wakporo nwere ike gbakee.
Kasị Them ngwaọrụ na-akwado maka data mgbake.
Ozugbo i mata na data dị gị mkpa, ị ga-ịzụta ụfọdụ n'ezie data mgbake software ma ọ bụ ịhụ ohere na gị disk idetuo gị data.
Na-agba naanị na Windows Operating System.
4.Zero Assumption Iweghachite
Nke a software-enye gị ohere iji naghachi data gị nchekwa draịva na dị iche iche okwu idozi. Wakporo data mgbake bụ otu n'ime nhọrọ. Nke a software rụrụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọrụ.
Ọ nwere ike na-agbake formatted mpịakọta, ehichapụ faịlụ na Raw faịlụ.
Special mgbake nke dijitalụ photos.
MBR mmebi mgbake.
Na-agba naanị na Windows na Linux; bụghị na Mac
Mgbake usoro na-ewe ogologo oge ma ị nwere ike adịghị etinye aka na n'etiti banyere 3 awa.
Nke a bụ nchịkọta nke software ibido emepụta site R-Ngwaọrụ technology. Ọ na-eji ụfọdụ n'ime elu usoro na atụmatụ ke data mgbake taa.
Data ụkpụrụ ude na nkọwa ya.
Non ọkọlọtọ kpara akwụ etoju nke wakporo nwere ike gbakee.
Akpaka wakporo oke ude na-anọgidesi ego.
Ọ dịghị nkwa naghachi niile furu efu faịlụ.
Overwriting nwere ike ime ma ọ bụrụ na nwara idetuo furu efu faịlụ ka otu diski.
Nkebi nke 2: Gịnị bụ wakporo?
A nkịtị ike mbanye na wakporo ike mbanye dị iche na ụzọ ha ọrụ. Nzube bụ isi nke a wakporo bụ nwere data redundancy na inwe mma arụmọrụ. Ndị dị elu nke redundancy, na elu arụmọrụ. Wakporo guzo n'ihi na ejighi oru n'usoro nke Independent diski, mbụ maara dị ka ọnụ diski.
The arụmọrụ-enweta site na nkà na ụzụ nke na ijikọta multiple disk draịva otu ezi uche mpaghara. Mkpa maka data redundancy na arụmọrụ si dị iche na atụ na-atụ. Ya mere e nwere ndị ụfọdụ na-etoju ka otú ndị data redundancy na arụmọrụ ga-emetụta. E nwere ọnụ ọgụgụ nyere ndị wakporo usoro ka mma nzube. Wakporo 0 bụ onye kasị nta emede na ejighi oru ebe wakporo 6 nwere ihe abụọ etoju nke njehie mgbake.
Dabere na ọtụtụ maka wakporo, ihe isi ike ma ọ bụ easiness nke data mgbake usoro ga-ga-iche. Ọ bụrụ na otu disk ada ada ke a wakporo 0 draịva, mgbe ahụ, niile disks ada na e nweghị kwere omume data mgbake. Ọ bụ ihu ọma a usoro iji ihe karịrị otu ọnọdụ maka data nchekwa site parity.
The wakporo usoro nwere ike ike anya na ìgwè abụọ dabeere na ọdịdị nke wakporo na mgbakwunye na nke wakporo nọmba. E nwere ma Hardware raids na Software raids.
Nkebi nke 3: iche n'etiti Ike wakporo na Software wakporo
Hardware wakporo pụtara a ngwaike dabeere usoro. Ngwaike e mere na webatara ịnabata wakporo usoro. Ọ pụrụ ma-rụrụ site a wakporo kaadị ma ọ bụ na-wuru na motherboard onwe ya. Ke ụdị technology, iche iche disks na-eji ma usoro mkpa ha niile dị ka otu disk. The nke pụrụ ịkpata ikike nke wakporo mbanye ga-adabere na ọnụ ọgụgụ nke disks eji na larịị nke wakporo. Na-emekarị ndị dị elu nke wakporo nọmba, ala na nke pụrụ ịkpata ikike nke disk n'ihi ukwuu ohere na-eji maka parity na-eme data mgbake nnọọ mfe karịa aga larịị. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na otu nọmba nke disks na otu ikike na-eji wakporo 0, na nke pụrụ ịkpata ike ga-elu karịa mgbe ha ga-eji a wakporo 6 mbanye.
Software wakporo, dị ka aha kwuru, na-ada banyere site software na ọ dịghị mkpa na maka ngwaike na-mbụ ahazi na-a wakporo mbanye. Na a na kọmputa usoro e nwere ngwá ọrụ dị ka na Ngwaọrụ Manager ka mma jikwaa ọ bụla akụrụngwa nke ngwaike. The software na mmemme na-ọkpọka ugbu a ka anyị nwere ike n'ezie megharịa ọrụ nke ngwaike site elu software. A software wakporo na-enweta site allocating oghere dị iche iche draịva na-etolite a mebere wakporo mbanye. Kọmputa ahụ ga-aghọta niile jikọtara oghere dị ka otu otu disk ma ọ bụ mbanye. Na arụmọrụ nke kọmputa, nile jikọtara components nke a software wakporo ga-abụ otu.
Top 10 Best CD na DVD Burners
Olee otú Idozi Draịvụ Failure & Crash
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site HP Ike diski
> Resource> Draịvụ> Top 5 wakporo Draịvụ Data Recovery Software